Maamulka Deegaanka Baxdo ayaa soo bandhigay Hub iyo Xubnaha ka tirsan Alshabaab | dayniiile.com
Home WARKII Maamulka Deegaanka Baxdo ayaa soo bandhigay Hub iyo Xubnaha ka tirsan Alshabaab
Maamulka Deegaanka Baxdo ayaa soo bandhigay Hub iyo Xubnaha ka tirsan Alshabaab
Maamulka degaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan degaankaas ayaa maanta goob fagaare ah ku soo bandhigay, meydadka xubnihii alshabaab looga dilay dagaalkii shalay, saanad ciidan oo laga furtay dagaalka iyo maxaabiis nool.
Saraakiishu waxay sheegeen in la tiriyey meydadka 70 alshabaab ah, waxaana raga la dilay ku jira xubno ajaanib ah, sidoo kale waxaa nolosha lagu qabtay oo maanta fagaaraha Baxdo lagu soo bandhigay dhagarqabihii waday gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa.
Sidoo kale ugu yaraan 42 arday oo degaanka Baxdo ku dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta deegaankaas ku galeysa imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda, guddoomiyaha degaankaas Maxamed Cabdullahi ayaa Warbaahinta u sheegay in haatan wax cabsi ah aysan ka jirin Baxdo.
Previous articleDuulimaadyadii Diyaaradaha u duuli jiray gudaha dalka oo la joojiyay
Next articleMD Xasan sheekh oo safarkiisi ugu horeeyey ku tagya Dalka Emaraadka Carabta
Pakistan top court to weigh in on political crisis as no-trust...
Palestinians observe time-honored Ramadan customs. The Palestinian Territories’ Ramadan is distinguished...
Ciidamada Ruushka ee Ukraine oo sun loogu daray rooti